Nhazi Kaadi Ebe E Si Nweta na Mobile Checkouts kọwara | Martech Zone
Nhazi Kaadị Nhazi na Mobile Checkouts kọwara
Nkwụ ụgwọ ekwentị na-aghọ ebe nkịtị na usoro siri ike maka ịmechi azụmaahịa ngwa ngwa ma na-eme ka usoro ịkwụ ụgwọ dịrị ndị ahịa mfe. Ma ị bụ onye na-eweta ecommerce na ụgbọ ibu azụmahịa zuru ezu, a onye ahịa na ndenye ọpụpụ ekwentị (ihe atụ anyị ebe a), ma ọ bụ ọbụna onye na-eweta ọrụ (anyị na-eji FreshBooks maka ịkwụ ụgwọ na ịkwụ ụgwọ nyeere aka), ịkwụ ụgwọ ekwentị bụ nnukwu atụmatụ iji jikọta ọdịiche dị n'etiti mkpebi ịzụta na ntụgharị ahụ.
Mgbe mbụ anyị debanyere aha, ọ juru anyị anya na ọ siri ike ibili ma na-agba ọsọ ma ghọta ụgwọ niile metụtara. Nke ahụ bụ afọ ole na ole gara aga… ugbu a ngwọta niile dị ka Bluepay na-eme ka usoro a dị mfe na ụgwọ ndị metụtara nnabata kaadị akwụmụgwọ. Ha nyere ụfọdụ nduzi maka ndị na - agụ akwụkwọ anyị ebe a.
Anylọ ọrụ ọ bụla na-anabata kaadị akwụmụgwọ nwere ohere iji belata mmefu site na ịzụ ahịa gburugburu maka ndị na-enye kaadị akwụmụgwọ na usoro nhazi ịkwụ ụgwọ. Enwere ọtụtụ nhọrọ nhazi dị iche iche na ahịa, nke ọ bụla nwere atụmatụ na ụgwọ dị iche iche. Chọọ nke na-enye nchebe dị elu, ịdị mma dị elu, ọnụego dị ọnụ, yana nke kachasị mkpa ọ dị. Ndị na-arụ ọrụ ịkwụ ụgwọ na-adịgasị iche iche bara uru ma a bịa nha otu ọrụ, olu nke ịkwụ ụgwọ ị na-arụ na ikike gị iwulite akara ngosi n'etiti ndị ahịa. Ozugbo usoro ịkwụ ụgwọ gị dị, ị gaghị echegbu onwe gị - ị nwere ike ilekwasị anya na ngwaahịa na ọrụ gị. Kristen Gramigna, CMO nke Bluepay.
Checklọ nlele ekwentị na-arụ ọrụ site na iji ngwaọrụ mkpanaka nke ndị ahịa iji nyefee ozi ahịa kaadị kredit, nye ikike kaadị ahụ, ma zipu nnata. Iji a akaụntụ ahịa mkpanaka, a na-ebunye ahịa ahụ na ntanetị na kọmputa na onye na-ere ahịa na-enweta ego ya naanị n'ime ụbọchị abụọ ma ọ bụ atọ. Nke ahụ bụ nnukwu mmụba na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụbọchị 30 na-etinye aka na kaadị kaadị akwụmụgwọ. Ndị na-ere saịtị na-ewepụ nkwụghachi azụ na-adị mfe, kwa. Gwọ ahụ na-apụkarị na kaadị ndị ahịa n'ime awa 24.
Nhazi nke kaadị kredit akwụmụgwọ na-enye ndị azụmaahịa nnwere onwe ịpụ n'azụ ahịa ahịa ma gaa ebe ndị ahịa ha nọ, ma ọ bụ na ngosipụta nke ime obodo, ememme n'okporo ámá, ụgbọ ala nri ma ọ bụ ọbụlagodi ngosi ahụ dị n'akụkụ ebe a na-akwụ ụgwọ. Ikike ndị na-ere ahịa ịnabata kaadị akwụmụgwọ na debit, ebe ọ bụla ha nwere ike, na-agbanwe Main Street na ụzọ ndị America si azụ ahịa.
Mentkwụ Gategwọ vgwọ vs. mentkwụ Processgwọ Processor
Zọ ịkwụ ụgwọ ego na onye na-akwụ ụgwọ ụgwọ bụ njikọ abụọ dị mkpa na usoro nhazi ịkwụ ụgwọ. Dịka onye nwe azụmaahịa, ị nwere ike ịnụ usoro ndị a ma na-eche ihe dị iche. E nwere ndị anọ metụtara na azụmahịa ọ bụla kaadị azụmahịa:
Onye ahịa ahụ
Banklọ akụ na-enweta ọrụ na-enye ọrụ ndị ahịa ahịa
Issulọ akụ na-ewepụta ego nke nyere ndị ahịa kaadị kredit ma ọ bụ kaadị debit
Ọrụ nke ndị na-arụ ọrụ ịkwụ ụgwọ na ụzọ ịkwụ ụgwọ dị iche, mana nke ọ bụla bụ akụkụ dị mkpa na ịnakwere ịkwụ ụgwọ na ntanetị.
Gini bu ugwo ahia? - Iji nabata kaadị kredit na azụmahịa gị, ndị ahịa wepụta akaụntụ yana ndị na-eweta ọrụ azụmaahịa dịka BluePay. Onye na-akwụ ụgwọ ahụ na-akwụ ụgwọ azụmahịa ahụ site na ịnyefe data n'etiti gị, onye ahịa ahụ; ụlọ akụ (ya bụ, ụlọ akụ nke nyere kaadi nke onye ahịa gị); yana ụlọ akụ (ya bụ, ụlọ akụ gị). Onye na - eme ego na - enye igwe ihe eji eme ihe na igwe ihe ndi ozo iji anabata ugwo nke kaadi ego.
Gini bu uzo ugwo? - Ọnụ ụzọ ịkwụ ụgwọ na-enye ikike ikike ịkwụ ụgwọ maka ebe nrụọrụ weebụ e-commerce. Were ya dị ka ebe ị na-ere ere n’ịntanetị maka azụmaahịa gị. Mgbe ị debanyere aha maka akaụntụ ahịa, onye na-eweta gị nwere ike ọ gaghị enye gị ụzọ ịkwụ ụgwọ.
Nhazi mentkwụ vgwọ na Ọnụ Payzọ mentkwụ waygwọ: Kedu nke m chọrọ?
Ihe kachasị eji ụzọ ụzọ eme njem bụ ụlọ ahịa ecommerce na ịntanetị. Ọ bụrụ na ị bụghị azụmahịa e-commerce, ị nwere ike ọ gaghị achọ ọnụ ụzọ ịkwụ ụgwọ. Akaụntụ ahia nke mbu nwere ike idi nma. Chọọ maka akaụntụ azụmaahịa nwere ọnụego ịkwụ ụgwọ ezi uche dị na ya, ọrụ ndị ahịa 24/7, yana PCI na-ekwenye (ụkpụrụ maka nchekwa kaadị akwụmụgwọ) nhazi.
N'aka nke ọzọ, ọnụ ụzọ ịkwụ ụgwọ nwere ike ịbụ n'ọdịnihu gị ma ọ bụrụ na ịnwee ma ọ bụ na-eme atụmatụ saịtị e-commerce. Ọ bụghị ndị ahịa niile na-azụ ahịa nwere ọnụ ụzọ ịkwụ ụgwọ. Providersfọdụ ndị na-enye ọrụ na-eji ụzọ ịkwụ ụgwọ ndị ọzọ, nke nwere ike ịbụ nsogbu mgbe ị nwere esemokwu. Kedu onye ị na-akpọtụrụ mgbe ị nwere nsogbu?
Ọnụ ụzọ ámá na ụgwọ ọrụ
Otu ihe mere otu dị iche iche jiri kwụsị itinye ego na usoro onyinye nke kaadị kredit bụ maka ụgwọ akwụmụgwọ. O nwere ike isiri gi ike ichota otutu ego ndia ma choo ma ha kwesiri ndi ulo oru gi. Ndepụta na-esonụ na-agụnye ụdị kachasị nke ụgwọ kaadị akwụmụgwọ.
Ahịa akaụntụ ụgwọ - Onye ahia bu onye obula ma obu ulo oru ndi na emeputa kaadi ahia. Dịka, a na-akpọkarị akaụntụ nhazi dị ka akaụntụ ahịa. A na-akwụ ụgwọ niile site na akaụntụ ego a.
Ego otu oge - Kasị ahịa akaụntụ na-abịa na ụfọdụ ụdị nke mbụ Mbido ego. Enwere ike ịkpọtụrụ ego a dị ka ntọala ụzọ mbata ma ọ bụ ego ngwa. Companiesfọdụ ụlọ ọrụ na-achọkwa ịkwụ ụgwọ maka ngwanrọ ma ọ bụ akụrụngwa ndị ọzọ ejiri maka nhazi azụmahịa. You na-eji usoro ntanetị weebụ ma ọ bụ na ị na-agbazinye akụrụngwa gị? Ọ bụrụ otu a, ịnwere ike ịnwe ego kwa ọnwa karịa ego otu oge maka sistemu ma ọ bụ akụrụngwa.
Ego akaụntụ kwa ọnwa - Fọrọ nke nta ka ọ bụla ahịa akaụntụ na-abịa na a kwa ọnwa ego. Enwere ike ịkpọ ego a dị ka akaụntụ, nkwupụta, ma ọ bụ ụgwọ akụkọ. Dịka, ụgwọ kwa ọnwa dị na $ 10 na $ 30. Na mgbakwunye na ụgwọ ọnwa, ụfọdụ akụkọ na-achọ kwa ọnwa kacha nta.
Ego azụmahịa na ọnụego mbelata - Azụmaahịa ọ bụla na-enwekarị ego nhazi abụọ… an ego ụgwọ (n'ozuzu ego a dị na nso nke $ 0.20 na $ 0.50) na a pasent azụmahịa. A na-ezo aka na ego a dị ka ego ọnụego. Ọnụ ego dị iche iche dị iche iche maka ndị nhazi dị iche iche, nke na-adịkarị na pasent abụọ na anọ. Typedị kaadị akwụmụgwọ na usoro nhazi abụọ na-ekere òkè na ọnụego ego. Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ego mbelata na-aga ụlọ ọrụ na-enye kaadị akwụmụgwọ (ntụgharị Visa, Discover).
Nsogbu nke iji kaadị na ọrụ atụnyere
O siri ike, ma ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume, iji tụnyere ụgwọ maka ụlọ ọrụ dịgasị iche iche n'ihi na ọtụtụ n'ime ha anaghị eweta ụgwọ ha n'ụdị dị mfe. M na-amalite na-eche na ọtụtụ gateways na processors-eme nke a na nzube!
Dị ka ihe atụ, mgbe ụfọdụ ego udu na-agbajikwa n'ime Mgbanwerịta ego na ụgwọ maka nzukọ ijikwa azụmahịa dị iche iche. Ihe ndị ọzọ nwere ike imetụta ụgwọ azụmahịa gụnyere ihe ndị a:
Ofdị kaadị eji (ntụgharị: kaadị kredit na kaadi debit)
Usoro nhazi maka azụmahịa (ntụgharị keyed na vs. swiped)
Nnwale mgbochi aghụghọ (ya bụ otu adreesị a na-eji maka adreesị ịgba ụgwọ kaadị akwụmụgwọ na azụmahịa ahụ?)
Njikọ metụtara azụmahịa ahụ (yabụ ọtụtụ ụlọ ọrụ kwenyere na azụmaahịa gwụchara na-enweghị kaadị swipe dị ka ihe dị ize ndụ)
BluePay bụ ihe niile na-ewetaHa nwere ọnụ ụzọ ịkwụ ụgwọ ha nke dị maka ndị na-ejide akaụntụ ahịa. Enwere ike iji ọnụ ụzọ BluePay rụọ ọrụ na gburugburu ụlọ ahịa na-agụ swipe. A na-agbanye Bluepay n'ime ọtụtụ naa usoro ma nwee ike hazie azụmahịa ịkwụ ụgwọ PIN. Iji ọnụego ịkwụ ụgwọ iji hazie ego ịjikọtara ọnụ nwere ike belata njehie, mee ka nhazi azụmahịa ngwa ngwa, ma mee ka udo dịghachi.
Ọ bụrụ n’ịchọghị itinye ego na ọdụ, ma ọ bụ ọ bụrụ na ịnweghị websaịtị ecommerce, ị nwekwara ike iji ọnụ ụzọ ámá Virtual BluePay iji hazie azụmahịa ọ bụrụhaala na ị nwere njikọ Internetntanetị.
IHE: A naghị akwụ anyị ụgwọ, ma ọ bụ na anyị nwere mmekọrịta ọ bụla na Bluepay… ha dị mma iji nye ozi niile anyị chọrọ iji nweta post blọgụ a!
Tags: bluepaykaadị swipekaadịụgwọ kaadị akwụmụgwọnhazi kaadị akwụmụgwọdebit kaadịmgbochi wayoekwentị mkpanakaịkwụ ụgwọ ọnụ ụzọ ámá ụgwọPCIpci nnabataụgwọ nhazimebere ọnụ
25 Mobile Marketing stats maka 2014 nke ahụ
Jun 4, 2015 na 1:08 AM
Nke a na-akọwa ihe niile m chọrọ ịma. Akwa isiokwu!